Photo-Shop | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Photo-Shop. Show all posts
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင် ထားသော ဘော်ဒါတို့ အတွက် အထူး အခွင့်ရေး တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။
Computer မရှိပေမယ့် ဖုန်းရှိရုံ နဲ့ Pc ရှိတဲ့ Adobe Photoshop ကဲ့သို့ ဖုန်းထဲမှာ ဓာတ်ပုံ ကောင်း
ကောင်း လုပ်ချင်တဲ့ ဘော်ဒါတို့ အတွက် Adobe Photoshop Express ဗားရှမ်သစ်(Updated) လေး
ဒီApps မှာ လုပ်နိုင်တာလေးတွေ ကတော့Crop, Red eyes remove, flip and rotate Auto fix 0ne
click ကာလာပြောင်းခြင်း..ကာလာ ညှိခြင်း အဖြူအမဲပြုလုပ်ခြင်း အစရှိတဲ့ Features ပေါင်း များ
စွာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်.. မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ Facebook, twitter, Google+ အစရှိတဲ့ Social
Networking website တွေမှာ.. သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ မိမိရဲ့ ပုံလှလှလေး ဒီဇိုင်း အလန်းလေးတွေကို
ရှယ်ယာ လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ဆောင်ထား သင့်ပါတယ်။ဒီကောင်းလေးရဲ့
ဖိုင် ဆိုဒ်လေး ကတော့41MB ရှိပါတယ်။
Current Version : 2.4.507
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Photo-Shop
ဖုန်းမှာ photoshop သုံးပြီး ဓာတ်ပုံတွေ အလွယ်ပြင်နိုင်တဲ့ Photoshop Touch for phone v1.3.6 Apk
ဖုန်းမှာ photoshop သုံးပြီး ဓာတ်ပုံတွေ အလွယ်ပြင်နိုင်တဲ့ Photoshop Touch for phone လေးပါ ဗားရှင်း
အသစ်လေး ထွက်လာလို့ ဘော်ဒါတွေ အတွက်တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Transform your images with core Photoshop features. Combine images, apply professional effects, and share results with friends and family through Facebook and Twitter — all from the convenience of your phone. Enjoy most of the same
features as the tablet version:
From :အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Paye PhyoKyaw
Photoshop နဲ့ လိုင်စင် Passport ပုံကို Action နဲ့ အမြန်လုပ်နည်း
ပထမဦးဆုံး Action လေးကို ဒေါင်းလိုက်နော်
ပြီးရင် Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
အဆင်သင့် ရိုက်ပြီးသား ပုံလေးကို File Open နဲ့ ခေါ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် Window Menu က Action ကို ခေါ်လိုက်ပါ
Action Box လေး ကျလာရင် Lond Actions ကနေဒေါင်းလို့ ရထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ အောက်
ကပုံလေး အတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ကိုယ်ကူးမဲ့ စာရွက် အရွယ် ပုံဆိုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်တော်က 1' ပုံဆိုဒ် အရွယ် 4'x6' စာရွက် ကိုဘဲရွေး လိုက်ပါတယ်။
ပြီးရင် Play Selection ကို တချက်နှိပ်
ပုံအနေအထားကို ချိန်ပြီး Crop ဖြတ်ပါ
-ရပါပြီ အိုကေရင် ကီးဘုတ်က Enter ကို ခေါက်ပေး လိုက်ပါ။
-Passport ပုံ အမြ် လုပ်နည်း ဤတွင် ပြီးပါပြီ။
-နောက်လဲ အဆင်ပြေရင် တင်ပေး ပါအုံးမည်။
From : ဘလော့ခရီးသည် - by : ဟန်မိုးလွင်(အိမ်လွမ်းသူ)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, November 29, 20143comments:
ကဏ္ဍ Photo-Shop, နည်းပညာ
OnOne Perfect Portrait 9.0.1.1272 Premium Edition | 39.34 MB
Focus on the art of portrait creation because the most time consuming retouching tasks have now been automated. With Perfect Portrait, you can improve skin texture and color, remove blemishes, and enhance eyes, lips and teeth. You’ll find that it’s never been so easy to create stunning portraits your family and clients will love.
Home Page - http://www.ononesoftware.com/products/portrait9/
ကဏ္ဍ Photo Software, Photo-Shop
ဖုန်းမှာ ဓာတ်ပုံတွေ အလွယ်တကူ ပြု ပြင်နိုင်တဲ့ Photoshop Touch for phone v1.3.5 Apk
ဖုန်းမှာ ဓာတ်ပုံတွေ အလွယ် တကူပြု ပြင်နိုင်တဲ့ Photoshop Touch for phone လေး ကတော့ ကွန်ပျူ တာမှာ
လိုဘဲ ပုံတွေကို ရောယှက်ပြီး လှပအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ ကောင်းလေးပါ။
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Photo Software, Photo-Shop
မိမိ ဓါတ်ပုံလေးကို အနားထောင့်လေးမှာ ကော်လံ စတိုင် ဒီဇိုင်းလေး လုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ဒီနေ့ photoshow နည်းလမ်း မိမိ ဓါတ်ပုံလေးကို အနားထောင့် လေးမှာ ကော်လံ စတိုင်
ဒီဇိုင်းလေး လုပ်နည်း တင်ပေး လိုက်ပါတယ်..ခုမှလေ့လာနေသူ photoshopw ကို ဝါသနာပါသော ဘော်
ဘော်တွေ အတွက် တစ်နေရာမှာ အသုံးဝင်မယ် ထင်လို့ နည်းလမ်းလေးပေးလိုက်ပါတယ် ။
သိထားတက်ထားတဲ့ ဘော်ဘော်တွေတော့ ကျော်သွားပါနော် ကျွန်တော်လေ့လာပို့ချတာ အမှားလေးများပါ
ခဲ့ရင် သီးခံပေးကြပါ သိထားတဲ့ ဆရာများ ကတော့ အမှားလေးများကို တွေ့ရင် ထောက်ပြပေးပါ
ကဲစကားတော့ များပြီး သွားပြီဆိုတော့ လုပ်ငန်းလေး စလိုက်ကြ ရအောင်နော်....
အောက်က ပုံလေးတိုင်း photoshow ဖွင်ပြီး လုပ်ချင်တဲ့ ပုံလေး ဆွဲထည့်လိုက်ပါ ။
၂။ မှာတော့ သော့ရှိနေတဲ့ နေရာလေးကို left ကလစ်လေး ကလစ်ပေး လိုက်ရင်ဘဲ ဘောက်လေး တစ်ခု
တက်လာမှာပါ၊ တက်လာရင် ok ဖြေပေးလိုက်ပေါ့ ဒါဆိုပြောက်သွားပါလိပ်မယ် နောက်(၂)မျှားမှာပြထား
သလို မွားလိုက်ရမှာပါ အပြာရောင်ပေးထားတာက ပထမ ပုံပါ ပထမပုံကိုထောက်ပြီး ctrl+j ကိုတွဲ နိုပ်
လိုက်ရင်ဘဲ ပုံမှာပြထားသလို (၂) ခုတွေ့ရမှာပါနော်...
၃။ အောက်မှာပြထား တာကတော့ မွားထားတဲ့ပုံကို မောက်ထောက်ပြီး ပြာပေးထားပါ ပြီးရင် edit ကိုသွားပြီး
(၁) မျှား (၂) မျှား ပြထားသလို အဆင့်လိုက် ဝင်သွားပါ၊
၄။ အပ်ါမှာပြောခဲ့ သလို ဝင်လိုက်ရင်ဘဲ warp လေးနိုပ်လိုက် ရင်ဘဲ အောက်မှာ ပြထား သလို ပုံပေါ်မှာကျား
ကွပ်ပုံစံ လေးနဲ့ အကွပ်ပေါ်နေမှာပါ၊ (၁) မျှားမှာပြထားတာက ထောင့်စွန်းကနေ ကိုလိုချင်တဲ့ ပုံစံထိ အပေါ်
ကို ဆွဲရမှာပါ ၊ ပြီးရင် (၂) မျှားပြထားတဲ့ အမှတ်ကိုနိုပ်လိုက်ပါ ၊ ဒါဆို တစ်ဆင့်ပြီးပါပြီ။
၅။ အောက်က ပုံစံ ကတော့ နောက်ခံပုံ ထည့်ဖို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံ ထပ်ခေါ် လိုက် တာပါ နောက်ပြီး ပုံကို
ဘေးပို့ပြီး ပုံပေါ် မောက်ထောက်ပြီး ပထမ လုပ်ထားတဲ့ ပုံထဲ ဆွဲထည့် လိုက်ပါ။
၆။ ဒီမှာတော့ တွေ့တဲ့ အတိုင်းဘဲ နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး မပူနဲ့ ဆက်ပြောမယ် (၁) မျှားပြထားတာက ဆွဲ
ထည့်တဲ့ ပုံကို နေရာချ မလို့ ချိန်နေတာ ပထမပုံကို အုပ်မိုးနေတာတွေ့နေရတယ်မှတ်လား ထားချင်တာ
က ပုံအောက်မှာ မှတ်လား (၂)မျှားမှာ ပြထား တာက ဆွဲထည့် ထားတဲ့ ပုံရှိနေတဲ့ နေရာ ပေါ့ (၂)မျှား က
ပုံကို မောက်ထောက်ပြီး ဒုတိယနေရာကို ဆွဲလိုက်.....
၇။ အောက်က ပုံမှာတွေ့လား ဒုတိယနေရာ ရောက်သွားပြီ ဒါဆိုရပြီ မပြီးသေးပါဘူး (၂) မျှားပြထားတာက
ပုံသေး နေလို့ အကြီး ချဲ့ မှာပါ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပုံချဲဖို့ ပုံရှိနေတဲ့ နေရာကို ပြပေး ထား ရမှာပါ ပုံကို သေချာ
ကြည့်ပါ ၊နောက် ကီးဘုက်ပေါ်က ctrl+t ကို တွဲနိုပ်ပါ၊ နိုပ်လိုက် ရင်ဘဲ (၁) မျှားပြထား သလို ပုံမှာ အကွပ်
လေးပေါ်လာမှာပါ ပြီးရင် (၂) မျှားပြထား သလို ထောင့်ကနေ မောက်နဲ့ ဆွဲလိုက်ပါ ကိုယ် လို သလောက်
ပေါ့ သတိ..လူပုံဆိုရင် ကီးဘုက်ပေါ်မှ shist ကီးကို နိုပ်ပြီးဆွဲရပါ့မယ် ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့ ပုံပြတ်မှာ
၈။ ဒါကတော့ခုနက နောက်ခံပုံပေါ်မှာ ထားမယ် ပုံပါ မိတ်ဆွေတို့ ကတော့ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ ပုံထည့်ပါ ခုဆွဲ
ထည့်ထားတဲ့ ပုံကဖြတ်ပြီးသားပါနော် (၁)မျှားပြထားတာက ပုံရှိနေတဲ့ ဘားပါ (၂)မျှားပြထား တာကကီဘုတ်
ပေါ်မှ ctrl+a နိုပ်ရင် ပေါ်လာမယ့် အကွက်လေးပါ။ ပြီးနောက် တပြိုင်ထဲ ctrl+c တွဲနိုပ်ပါ
၉။ မှာတော့ ခုနက အပေါ်မှာ copy လုပ်ထား တာကို paste လုပ်ထည့် လိုက်ပါပြီ ပြီးရင် (ရ) ပြောခဲ့ သလိုပါ
ဘဲ အပုံကို လိုချင် သလို လုပ်ယူပါ။ ပြီးရင်တော့ မှောင်နေတဲ့ပုံတွေကို တစ်ခုချင်းဆီ အရောင်တင်မယ်နော်
(၁) မျှား (၂) မျှား ပြထားသလို တစ်ဆင့်စီ ဝင်သွားပါ curves ကို ကလစ်ရင် ဘောက်တစ်ခု တက်လာမှာပါ
(၂) ပုံမှာ မျှားပြထားတဲ့ ဘောက်လေးပေါ့ အရောင် (၄၀ မျိုး ရှိပါတယ် ရွေးလုပ်နိုင်ပါတယ် (၃)မျှားမှာပြပြီး
ဝိုင်းထားတာက အရောင်တင်ချင်တာကို တစ်ခုချင်းရွေးပြီး တင်ပါ
၁၀။ ဒီမှာတော့ အားလုံပြီး သွားလို့ ပုံကို သိမ်းမှာပါ သိမ်းဖို့ အတွက် file > save as နိုပ်ရင်ဘဲ ဘောက်
တစ်ခု တက်လာ မှာပါ ၊ ဒုတိယ ပုံပြထား သလိုပေါ့ ပြီးရင် (၁)မျှားပြ ထားတာ က နံမည်ပေးမယ့်နေရာ (၂)
မျှားပြ ထားတာက jpeg နဲ့ သိမ်းရပါမယ် jpeg2ရှိပါတယ် မျှားပြထားတဲ့ အပေါ်က jpeg ပါနော်...
ဒီလောက်ဆို နားလည်လောက် ပါပြီနော် နားမလည်သေး ရင်လဲ video ထပ်ကြည့်ပေ့ါနော် ကျွန်တော်လေ့လာ
သလိုဘဲ အသေးစိတ် တက်နိုင် သလောက် တင်ပေးလိုက်တာပါ မှားတာလေးတွေ ပါရင်လဲ နားလည် ပေးပါလို့
ထပ်ပြော လိုက်ပါရစေ၊ နောက်လဲ တက်နိုင် သလောက် ပို့စ်တွေ တင်ပေး သွားပါမယ်။
From: ဘလော့ခရီးသည် by IT Village
Adobe Muse CC 2014.1.1.6 Multilingual Latest Version
Adobe Muse CC 2014.1.1.6 Multilingual | 92.43 MB